အဆီလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတဲ့ အသီးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ - Hello Sayarwon
အသီးအရွက်တွေစားပြီး ဝိတ်ချတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သလို အသားအ​ရေကို ကြည်လင်စေတဲ့ အာနိသင်ကိုပါ ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒီတော့ အာဟာရလည်းရ၊ အသားလည်း ကြည်၊ ဝိတ်လည်းကျစေဖို့ အစာအိမ်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင် အသီးစားပြီး ဝိတ်ချတာက တော်တော်လေး အဆင်ပြေမှာပါ။
အဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးပါဝင်နေတဲ့အသီးပါ။ ကိုယ်တွင်း အကျိုးပြုအဆီပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး အဆီပိုတွေကိူ အကောင်းဆုံးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး သွေးတွင်းအချိုဓာတ်​ကြောင့်အဆီစုပုံမှုမဖြစ်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတာပါ။ အဝလွန်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ စားပေးသင့်ပါတယ်။ အရသာရှိရှိ Grapefruit (ဂရိတ်ဖရုစ်) ဖျော်ရည်လေးသောက်ရင်း ဝိတ်ချပါ။
ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသလို ဗီတာမင် C လည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် အဆာခံနိုင်သလို ကိုယ်တွင်းကအဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကိုပါ အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ဆဲလ်တွေက အဆီတွေစုပ်ယူနိုင်မှုကိုလည်း ကန့်သတ်ပေးပါတယ်။
ပန်းသီးကလည်း လိမ္မော်သီးလိုပါပဲ။ ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် အဆာခံနိုင်သလို ကိုယ်တွင်းကအဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကိုပါ အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ဆဲလ်တွေက အဆီတွေစုပ်ယူနိုင်မှုကိုလည်း ကန့်သတ်ပေးပါတယ်။ ဝိတ်ချနေသူတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့် အဆာပြေစားစရာတစ်ခုပါ။ အခွံကလည်း ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာကြောင့် အခွံမနွှာဘဲစားပေးပါ။ ရေစင်အောင်ဆေးဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့။
ကဲ..အရသာရှိရှိ အရောင်အသွေးလှလှအသီးလေးတွေစားရင်း ဝိတ်လည်းကျအသားလည်းလှဆိုတော့ ဘာများလိုဦးမလဲ……စမ်းကြည့်လိုက်တော့နော် အသီစားပြီးဝိတ်ကျချင်နေတဲ့ Helloဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရေ………..
Which Fruits Have Fat Burning Properties? https://www.curejoy.com/content/fat-burning-fruits/?utm_source=Popular&utm_medium=FCM&utm_campaign=Push Accessed Date 19 December 2019
12 Healthy Foods That Help You Burn Fat https://www.healthline.com/nutrition/12-fat-burning-foods Accessed Date 19 December 2019
Fat-Fighting Foods https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-fat-fighting-foods Accessed Date 19 December 2019